खेलकुद – MeroJilla.com
आज नेपाल र म्यानमार भिड्दै Wednesday, April 3rd, 2019
चैत, काठमाडौं । ओलम्पिक खेलकुदको महिला फुटबलअन्तर्गत एसिया क्षेत्र छनोटको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा आज नेपालले आयोजक म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । मन्दलर थिरी रंगशालामा नेपाली समयअनुसार बेलुकी ५ बजेर १५ मिनेटमा नेपालले म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो यसअघि ओलम्पिक खेलकुदको महिला फुटबलअन्तर्गत एसिया क्षेत्र छनोटको पहिलो चरणमा पनि म्यानमारसँग नेपालले..
एएफसी कप : मनाङ र अबहानी भिड्दै
चैत, काठमाडौं । घरेलु टोली मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले एएफसी कप अन्तर्गत समूह ‘ई’ को आफ्नो पहिलो आज बंगलादेशको ढाका अबहानीविरुद्ध खेल्दैछ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेलमैदानमा दिउँसो तीन बजे मनाङ र अबहानीबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो नेपालको ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मनाङ अबहानीलाई पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गर्नेर् लक्ष्यमा छ । अबहानी पनि घरेलु टिमलाई पराजित..
साफ महिला फुटबल : इतिहास रच्न आतुर नेपाली चेली Friday, March 22nd, 2019
चैत, विराटनगर । साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि नेपालले आज भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । विराटनगरको शहिद रंगशालामा दिउँसो तीन बजे सुरु हुने फाइनल खेलमा नेपाल इतिहास रच्न चाहन्छ । चौथो पटक भारतविरुद्ध साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागि रहेको नेपाल आफ्नै भूमिमा उपाधि उचाल्न चाहन्छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत साफ..
आर्सनल युरोपा लिगको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश Friday, March 15th, 2019
१ चैत्र, काठमाडौं । आर्सनल युरोपा लिग फुटबलको क्वारटफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार राति प्रिक्वारटफाइनलअन्तर्गत दोस्रो लेगमा रिनेसलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै लिभरपुल क्वारटफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । पहिलो लेगमा ३–१ गोलअन्तरले पराजित भएको आर्सनलले उत्कृष्ट पुनगरागमन गर्दै ३–० गोलको जीत निकालेको हो । समग्रमा आर्सनलले ४–३ गोलअन्तरको जीत निकालेको हो । आर्सनलको..
रसिया विश्वकपपछि पहिलोपटक अर्जेन्टिनी टिममा परे कप्तान मेस्सी Friday, March 8th, 2019
२४ फागुन, काठमाडौं । कप्तान लियोनल मेस्सी रसिया विश्वकप २०१८ पछि पहिलोपटक अर्जेन्टिनाको टिममा परेका छन् । उनी भेनेजुएला र मोरक्कोविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अर्जेन्टिनाको प्रारम्भिक ३१ खेलाडीको लिष्टमा पर्न सफल भएका हुन् । उनले यसअघि अर्जेन्टिनाको ६ वटा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल गुमाएका थिए । विश्वकप २०१८ को प्रिक्वाटरफाइनल खेलमा फ्रान्ससँग खेलेपश्चात..
सडन डेथ जितेपनि आर्मीले उपाधि गुमाउँथ्यो ! Sunday, March 3rd, 2019
फागुन, पोखरा । सडन डेथमा थ्रीस्टारसँग पराजित भएपछि आर्मी पहिलो पटक आहारारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि जित्नबाट चुक्यो । तर, यदि सडन डेथमा आर्मीले जितेको भए पनि उसले उपाधि पाउने थिएन, थ्रीस्टार नै जित्थ्यो । तपाई भन्नुहोला, यो कसरी हुन्छ ? सडन डेथ जितेको भए त आर्मी नै च्याम्पियन बन्थ्यो । फागुन, पोखरा । सडन डेथमा थ्रीस्टारसँग पराजित भएपछि आर्मी पहिलो पटक आहारारा गोल्डकप फुटबलको..
टी-२० महिला विश्वकप एसिया छनोट : आज नेपालले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै Monday, February 25th, 2019
१३ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० महिला विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत एसिया क्षेत्र छनोटमा आज नेपालले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । थाइल्यान्डको बैंकक्मा आज नेपालले आफ्नो पाँचौ खेलमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । खेल नेपाली समयअनुसार १२ बजेर ४५ मिनेटमा सुरु हुनेछ । चीनलाई पराजित गर्दै नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राख्न चाहन्छ । चीन जारी..
सरकार रंगमञ्च बन्यो ? नेता गुरुङ् Wednesday, February 6th, 2019
प्रकाश डोटेल,स्याङ्जा- नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङ्ले राष्ट्रिय पहिचानको पहिलो माध्याम खेलकुदको विकासमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । रंगमञ्चका कलाकारलाई रंगशाला बनाउने जिम्मा दिएर सरकार रंगमञ्च बनेको उनको भनाई थियो । “सम्बृद्धि अभियान थालेको सरकार एक वर्षसम्म कुनै विकास निर्माणका काम गर्न सकेको छैन् ।” स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउ“पालिका..
प्रधानमन्त्रीलाई थाहै भएन नेपाली क्रिकेट टिमले इतिहास रचेको Monday, February 4th, 2019
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ ट्वीट गर्दै नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई दिए तर उनलाई नेपालले टि–ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला जितेर इतिहास रचेको तथ्य भने पत्तो नै नभएको उनको ट्वीटबाट प्रष्ट हुन्छ । उनले युएईविरुद्धको तेस्रो खेल जितेकोमा नेपाली टोलीलाई बधाई दिएका छन् । तेस्रो अघिल्ला दुई खेलमध्ये एकमा युएई र अर्कोमा नेपाली टिम विजयी हुँदै तीन..
आर्दशमा स्क्राबल प्रतियोगिता सम्पन्न,शनिबार पोखरामा फाइनल,बिजेता वंग्लादेशको अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाने । Friday, November 23rd, 2018
पर्वत । अगं्रजी शब्दकोष वढाउन कुश्मामा जिल्ला स्तरीय स्क्राबल प्रगियोगिता सम्पन्न भएको छ ।स्क्रावल एशोसिएसन नेपालको आयोजना र आर्दश मावि कुश्माको सहकार्यमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो । प्रतियोगितामा ६ वटा विद्यालयका प्रतियोगीहरुले भाग लिएका थिए । स्क्राबल प्रगियोगितामा आर्दश माविका सुर्यचन्द्र रेग्मी,नमूना माविका सन्देश पौडेल,निरञ्जन पौडेल,गणेश मावि बाग्लुङका..